Wararka Suuqa Maanta: Gunnar Solskjaer oo Shaxdiisa Ka Saaraya Shan Xidig, Heshiiska Mount iyo Qodobo kale | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: Gunnar Solskjaer oo Shaxdiisa Ka Saaraya Shan Xidig, Heshiiska...
Wararka Suuqa Maanta: Gunnar Solskjaer oo Shaxdiisa Ka Saaraya Shan Xidig, Heshiiska Mount iyo Qodobo kale
Chelsea ayaa dooneysa inay ka dhigto ciyaaryahanka khadka dhexe ee England Mason Mount mid ka mid ah kuwa ugu mushaharka badan iyadoo kooxda ay isku diyaarineyso inay wadahadalo qandaraas la furto 22 jirkaan. (Goal)
Weeraryahanka reer Spain Ansu Fati, oo 18 jir ah, ayaa ku dhow inuu heshiis cusub oo waqti dheer ah u saxiixo Barcelona kaas oo ay ku jiri doonto isla 1bn euro (£ 846m) oo ah lacagta lagu burburin karo saaxiibkiisa Pedri, oo 18 sano jir ah. (Fabrizio Romano)
Daafaca midig ee kooxda Atletico Madrid iyo xulka England Kieran Trippier, oo 31 jir ah, kaasoo si weyn loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Manchester United , ayaa sheegay inuu “jeclaan lahaa” inuu mar kale ka ciyaaro Premier League. (Mirror)
Tababaraha United Ole Gunnar Solskjaer ayaa isku dayi doona inuu shaxdiisa ka saaro ugu yaraan shan ciyaartoy marka uu furmo suuqa kala iibsiga bisha Janaayo. (Thesun)
Liverpool, Borussia Dortmund ama RB Leipzig waa inay bixiyaan inta u dhaxaysa 30m ilaa 40m euros si ay ula soo saxiixdaan weeraryahanka RB Salzburg iyo Jarmalka Karim Adeyemi, oo 19 jir ah (ORF -sport)
Milkiilayaasha cusub ee kooxda Newcastle United ayaan weli xiriir la sameyn tababare Steve Bruce ka dib guuldaradii kooxda Magpies ay ka soo gaartay Tottenham Hotspur axadii. (DailyStar)
Liiska musharraxiinta beddeli doona Bruce ee Newcastle United ayaa ku soo koobmay Eddie Howe, Paulo Fonseca iyo Lucien Favre, oo mid walba wadahadal bilow ah la yeeshay kooxda toddobaadkii hore. (90 Min)
Daafaca reer Holland Matthijs de Ligt, oo 22 jir ah, ayaan ku qanacsanayn doorkiisa Juventus , taasoo keentay in wakiilkiisa Mino Raiola uu wadahadalo la yeesho Barcelona si uu ugu dhaqaaqo. (Sport – Isbaanish)
Roma ayaa xiiseyneysa weeraryahanka Aston Villa Anwar El Ghazi iyadoo kooxda Midlands ay u ogolaan doonto 26 jirka reer Netherlands inuu ku tago 18 milyan ginni. (FootballInsider)
Tababaraha Leicester City Brendan Rodgers ayaa ammaanay 24 jirka qadka dhexe Youri Tielemans xilli ay Dawacadu doonayso inay qandaraaska u kordhiso xiddiga heerka caalami ee dalka Belgium, kaasoo dhacaya dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda. (Dailymail)
Weeraryahanka FC Dallas Ricardo Pepi ayaa heegan galiyay kooxaha ugu sarreeya Yurub oo ay ku jiraan Liverpool iyo Bayern Munich isagoo u gudbiyay codsi beddel ah-laakiin 18 jirkaan ayaa durba heshiis shaqsi ah la gaaray Wolfsburg . (CBS Sport)
Aston Villa ayaa u baahan doonta inay si dhaqso ah ugu dhaqaaqdo saxiixa River Plate Julian Alvarez iyadoo AC Milan ay sidoo kale xiiseyneyso 21 jirka reer Argentina. (Calciomercato)
Newcastle United iyo Leeds United ayaa seegi doona xiddiga qadka dhexe ee kooxda Blackburn Rovers Joe Rothwell maadaama 26 jirkaan uu doortay inuu u saxiixo Rangers . (TEAMtalk)
West Ham United ayaa isha ku heysa goolhayaha Barcelona Neto, oo 32 jir ah, kaasoo xor u ah inuu ka tago Nou Camp heshiis amaah ah bisha Janaayo inta kooxda saxiixiisa ay ogolaato inay iibsato xiddiga reer Brazil xagaaga. (Sport – Isbaanish)
Tababaraha Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa sheegay in kooxdu ay u baahan tahay inay go’aamiso ka hor ciidda Masiixiga haddii xiddiga reer Ivory Coast Amad Diallo, oo 19 jir ah, uu kooxda sii joogo ama inuu amaah lagu diro bisha Janaayo. (Football Italia)
Previous articleHordhac: Manchester United Vs Atalanta ee Champions League, Anthony Martial iyo Xidigaha kale ee Maqan
Next articleWeerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay duleedka KISMAAYO
Mohamed Salah oo jabiyay rikoorkii gooldhalinta Liverpool ee Manchester United iyo...
Maxamed Saalax ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyaytaariikhda Liverpool ee gool ka dhaliya Manchester United saddex kulan oo xiriir ah. Weeraryahanka reer Masar ayaa naftiisa ku caawiyay inuu seddexleey...
Wararka Suuqa Maanta: Paul Pogba oo Sharuud ku xiray Heshiiska Manchester...
Farmaajo oo soo saaray xeer madaxweyne oo shan qodob ka kooban...
War kasoo baxay safaaradda Mareykanka oo muujinaya in Abiy uu xaalku...